Nazoto tato am-piangonana foana aho hatrizay ary nandalo ireo dingana ao amin’ny Fisoronana Aharôna. Fony aho mbola zatovo dia nangataka ahy ny Rahalahy Jacob, izay mpampianatra ahy, hanoratra eo amin’ny baoritra kely ny eritreritra niserana tao an-tsaiko nandritra ny fanasan’ny Tompo. Noraisiko ny baoritra keliko ary nanomboka nanoratra aho. Nosoratako voalohany tao amin’ny lisitra ilay lalao baolina basket izay azonay ny hariva talohan’io, ary avy eo ny fiarahana tamin’ny tovovavy iray taorian’ny lalao ary dia nisy zavatra hafa maromaro mitovy amin’izany voatanisa tao. Tany amin’ny farany indrindra ary tsy mba niavaka akory ny anaran’i J